လတ်တလောဖတ်မိသော စာအုပ်များနှင့်အတွေးများ | ကျွန်မ၏ခံစားမှုများ သီကုံးရာ လွတ်လပ်ခြင်းအနုပညာ
October 31, 2008, 6:15 am
Comment by Kay October 31, 2008 @ 11:41 am
Comment by Kay October 31, 2008 @ 11:42 am
Comment by Kay October 31, 2008 @ 11:47 am
Comment by MrDBA October 31, 2008 @ 12:32 pm
Comment by ကောင်းကင်ကို October 31, 2008 @ 12:43 pm
အလုပ်များနေလို့ အခုမှ လာဖြစ်တယ်—
စာတော်တော် ဖတ်တဲ့ မိန်းခလေး လို့ပါပဲ—
ဒီလိုအသက်အရွယ်လေးမှာ စာပေါင်းစုံ ဖတ်နိုင်တာ
စာအသိ ဗဟုသုတ အကြည့် များနဲ့အတူ–
Comment by မသက်ဇင် October 31, 2008 @ 11:46 pm
I really really want to read Jue’s book “thu min go bel tot hma”. Is itanovel or short story? i magreat fun of Jue but i hv never seen that book. Could u pls do sth to read that book in ur blog or whatever. thank you very much.
Comment by pwint November 1, 2008 @ 8:51 am
အလည်ရောက် လာပါတယ်…စာအုပ်တွေကို မှတ်သားသွားပါတယ်
Comment by ***လမင်း*** November 1, 2008 @ 9:02 am
ကျွန်တော်ကတော့ များသောအားဖြင့် ဘာသာပြန်တွေဖတ်လေ့ရှိတယ်၊
စာရေးဆရာ မြသန်းတင့်က ကျွန်တော်အကြိုက်ဆုံး စာရေးဆရာတွေထဲကတယောက်ပဲ၊ သူ့စာအုပ်တော်တော်များများ ဖတ်ဖူးတယ် လက်လှမ်းမှီသလောက်ပေါ့။ စလုံးမှာတော့ ဝယ်မဖတ်ဖြစ်တာ ကြာပြီ အိမ်ရွှေ့ရင် ပစ္စည်းများမှာကြောက်လို့။
Comment by တက်တူ November 1, 2008 @ 5:25 pm
အော ဒါနဲ့ ပြောဖို့မေ့နေလို့၊ စာအုပ်ဆိုင်မသွားဖြစ်ရင် ကိုယ်ဟာကို
ကနေ download ၊ print ထုတ်ပြီး ဖတ်လို့ရတာပေါ့။
Comment by တက်တူ November 1, 2008 @ 6:27 pm
Comment by M.Y. November 2, 2008 @ 1:11 pm
အမစာအုပ်တွေထဲက “နှင်းကေသရာ…” ကလွဲလို့ အားလုံးဖတ်ဖူးတယ် ။ ဒါနဲ့စကားမစပ် “မြကြာဖြူ” ထဲက လင်းရွှေအောင် ကာရိုက်တာကို ဘယ်လိုများသဘောထားလဲ သိပါရစေ ၊ အမှန်အတိုင်းပြောရရင် ကျတော်သူ့ကို သိပ်သဘောကျတယ် ၊ ဒါပေမယ့် အတော်များများက ကျွန်တော်နဲ့ မတိုက်ဆိုင်ဘူး၊ (လူမှုရေးအရ အောက်တန်းကျတဲ့လူလို့ဆိုနိုင်ပေမယ့် တူးတူးအပေါ်ထားတဲ့ သူ့အချစ်ကို သိပ်လေးစားမိတယ် ) … အမရောဟင် ?
Comment by Aung Phyoe November 2, 2008 @ 2:02 pm
အရေးအသားကောင်းတဲ့ ဂျူးဂျူးရဲ့ 
Comment by pi November 2, 2008 @ 2:51 pm
မမကေ > အားလုံးအဆင်သင့်ဖြစ်သလောက်ရှိနေပါပြီရှင်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
MrDBA > ကျွန်မစိတ်ထဲမှာတော့ အချိန်ရတယ် ၊ လမ်းကြုံတယ်ဆိုရင် ကိုယ်ပိုင်မသိမ်းချင်တဲ့ အချို့စာအုပ်တွေကို ငှားဖတ်ရင် အဆင်ပြေနိုင်ပါတယ်။
ကိုကောင်းကင် > အကိုရေ နှမြောမနေနဲ့ အိမ်ပြန်ယူလိုက် 😛
မသက်ဇင် > ကျေးဇူးမမ။ ညီမ လေးစားခဲ့ရတဲ့ ဆရာတစ်ဦး ပြောကြားချက်ကြောင့် စာဖတ်ခြင်းပုံစံကို သေသေချာချာ နားလည်သွားခဲ့ရလို့ပါ။
Pwint > ဆရာမဂျူးစာအုပ်ကို လောလောဆယ်တော့ အသစ်မို့လို့ Ebook နဲ့ အွန်လိုင်းပေါ်မှာ မတွေ့ရသေးဘူး။ တကယ်လို့ ကျွန်မမှာ လုံလောက်သော အချိန်ရှိခဲ့ရင် ဖော်ပြပေးနိုင်ဖို့ ကြိုးစားပေးပါ့မယ်။
မလမင်း > အလည်လာတာ ကျေးဇူးပါရှင်။
ကိုတက်တူ > ဆရာကြီးမြသန်းတင့် စာအုပ်အများစုကို ကျွန်မ နှစ်သက်စွာ ဖတ်ဖြစ်ပါတယ်။ အားလုံးထဲမှာ လေရူးသုန်သုန်ကို အစွဲလမ်းဆုံးပေါ့။
အကိုမောင်ရင် > မြန်မာပြည်မှာနေစဉ်က ညီမ တစ်နေ့မှာ ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်မှာ ကျူတာလုပ်မယ်လို့ စဉ်းစားခဲ့ဖူးတယ်။ တက္ကသိုလ်နယ်မြေကြီးကို ရုပ်ရှင်တွေထဲကနေ ကြည့်တိုင်း သိပ်သွားချင်ခဲ့တယ်လေ။ အခုတော့ မျှော်လင့်ချက်တွေ ဝေးပေါ့ .. ။
ကိုအောင်ဖြိုး > လင်းရွှေအောင်ရဲ့ တူးတူးအပေါ် ချစ်တဲ့ အချစ်သက်သက် ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ `ချစ်လွန်းသူ´လို့ သတ်မှတ်လို့ရပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကျွန်မအမြင်က မိမိကိုယ်တိုင် လိုလိုချင်ချင်နဲ့ လက်ထပ်ထားသော အိမ်ထောင်ဖက်က လက်မခံနိုင်လောက်အောင် ဆိုးရွားခြင်းမရှိဘဲ တစ်ဖတ်သတ် စိမ်းကားပြတ်တောက်သွားခဲ့တာကို သဘောမကျပါဘူး။ တူးတူးနှင့် ပေါင်းဖက်ခြင်းမရတာနဲ့ ခံစားနေရတယ်ဆိုရင် အပြစ်မပြောလိုပေမယ့် အိမ်ထောင်ရေးဖောက်ပြန်မှုတွေကို ထပ်တလဲလဲ ကျူးလွန်နေတာကို လုံးဝသဘောမကျပါဘူး။
နောက်တစ်ချက် – သူ အင်္ဂလန်ကို ထွက်သွားချိန်မှာ တိတ်တိတ်ပုန်းလက်ထပ်သွားပြီး လက်ရှိတရားဝင် ဇနီးမယားတစ်ယောက်လုံးကို ပစ်ပစ်ခါခါ တစ်စက်မှ အသိပေးခြင်း မရှိဘဲ အဆက်သွယ်ဖြတ်တောက်လိုက်တာကိုလည်း သဘောမကျပါဘူး။ ကျွန်မက ယောက်ျားဆိုရင် နူးညံ့ကြင်နာလေးနက်ခြင်း နှင့် ပြတ်သားခြင်းရောစပ်ထားမှ သဘောကျလေ့ရှိတာကြောင့်ပါ။ ကိုယ်ဘာကိုလိုချင်တာလဲ ၊ ရနိုင်လား ၊ မရနိုင်လား ၊ ဘ၀ကို ဘယ်လို အကောင်းဆုံး ရှေ့ဆက်ရမလဲ စဉ်းစားသင့်တယ်လို့ ယူဆမိပါတယ်။ အိမ်ထောင်ရေးဖောက်ပြန်နေပြီး ပြောင်းလဲကောင်းမွန်လာတဲ့ မိမိဇနီးကို လျစ်လျူရှုထားရုံ ၊ သားသမီးတွေကို ဥပေက္ခာပြုထားရုံနဲ့ သူချစ်တဲ့ တူးတူးကို ပြန်ဆုံနိုင်လို့လားဆိုတဲ့ လက်တွေ့ကျကျ အတွေးကိုလည်း စဉ်းစားသင့်တယ်လို့ ယူဆမိပါတယ်။
`လူ´တွေရဲ့ အကျင့်က မရခဲ့တဲ့အရာတစ်ခုဆိုရင် တပ်တပ်မက်မက် စွဲလန်းသတိရနေလေ့ရှိပါတယ်။ တူးတူးကို ချစ်သော အချစ်သံယောဇဉ်ကြောင့်ရော ၊ ရယူပိုင်ဆိုင်ခြင်းမရှိခဲ့တာကြောင့်ရော သူ့ရင်ထဲက အချစ်တွေ မကုန်ခမ်းနိုင်ဘူးလို့ လင်းရွှေအောင် ထင်နေတာလို့ မြင်မိပါတယ်။ တကယ်တော့ အချစ်ဆိုတာ ပုံသဏ္ဍာန် အမျိုးမျိုးနဲ့ ဖွဲ့တည်ထားသော ခံစားချက်ပါပဲ။ မြကြာဖြူအပေါ်မှာ မကြိုးစားချင်တော့ရင်လည်း ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ပြတ်ပြတ်သားသား ရည်ရွယ်ချက်ကို ဆွေးနွေးသင့်တယ်လို့ မြင်မိပါတယ်။ ပစ်စလက်ခတ် လုပ်သွားတာကိုတော့ မကြိုက်မိပါဘူး။ တူးတူးကို မမေ့နိုင်တာ ပြဿနာမရှိပါဘူး။ ချစ်နေဆဲဆိုတာလည်း ပြဿနာမရှိပါဘူး။ လူဆိုတာ ကိုယ်တကယ်သိပ်ချစ်ရတဲ့ ချစ်သူနဲ့ မပေါင်းဆုံရရင် မမေ့နိုင်တာ သဘာဝမို့ လက်ခံနိုင်ပါတယ်။ တစ်ဖက်မှာလည်း လက်ရှိ တည်ဆောက်ထားတဲ့ ကမ္ဘာလေးအပေါ်မှာလည်း တာဝန်ကျေတဲ့ ၊ ကောင်းမွန်ပျော်ရွှင်စွာ ဖြတ်သန်းသွားနိုင်ဖို့ ကြိုးစားတဲ့ ယောကျာ်းကောင်းတစ်ယောက် ဖြစ်ရင်တော့ အကောင်းဆုံးပေါ့။
ကဲ ကိုအောင်ဖြိုးရေ ဒါက ကျွန်မအမြင်ပါ။ ပြောတာတွေ ပြင်းသွားရင် ခွင့်လွှတ်ပါ။ ကျွန်မက အိမ်ထောင်ရေးဖောက်ပြန်တတ်တယ်ဆိုသော လူ (ယောက်ျား၊မိန်းမ) တွေကို တစ်စက်မှ မကြိုက်တတ်လို့ပါ။ ကိုအောင်ဖြိုးက လင်းရွှေအောင် တူးတူးကိုချစ်တဲ့ အချစ်တစ်ခုတည်းကို ကြည့်ပြီး ဒီလိုသဘောကျ ဆုံးဖြတ်လိုက်တာလို့ ကျွန်မမြင်မိပါတယ်။ ကိုအောင်ဖြိုး အမြင်မှားတယ်လို့ ကျွန်မ မယူဆမိပါဘူး။
Comment by LIN LET KYAL SIN November 3, 2008 @ 1:23 am